"Imakrofoni ye-Shadow kwi-anus" - HienaLouca
"Imakrofoni ye-Shadow kwi-anus"
USergei Naumchik wabhala ezopolitiko нэкралёг ngokutsho kukaNikolai Dzemyantsi, apho ndafunda khona izivakalisi ezibini ezibalulekileyo mna: "Andizange ndenze intsingiselo" kwaye "andingenalo imigangatho yekhono lobugcisa". Ngaphandle kokudalula ezi mpawu, umfanekiso wesibini oyintloko weBhunga eliPhezulu ubonakala ungaphelelanga.
Isivakalisi sokuqala sonyaka we-25 wokugqibela kwi-Belarusian esemthethweni isisigxina sininzi esingabonakaliyo. Ngokukhethekileyo kwezopolitiko, zithi, yile shishini elingcolileyo.
Ndiyakhumbula iipowusta, apho ekuqaleni kwe-1990, abantu abaqhelekileyo beza kubhikisha ngokunyanisekileyo. "Dementeus - ukufa kwabantwana bethu!" - oku kukufihla imiphumo yentlekele yaseChernobyl, kunokuba enye inkokheli iMalefeev iya kwehla kwimbali. Iziphathamandla zinefuthe elincinane kwizinto ezihlala kwimbali. NjengoSergey Naumchik ngokuthe ngqo, uDementeau akazange afihle inyaniso ngeChernobyl.
Enye ipowusta evela kuloo mihlangano, ebonakalayo iproletarian: "Musa ukuvotela iDementei, udla i-caviar, kwaye siyaphupha!" Kwakungekho nto enokuyenza ngayo. Emva koko konke, uSomlomo wePalamente wayenabo abathandana nabo baseSoviet kunye nabaphathi bamaqela, abahlala "ngendlela encinci" kwaye ukuthobeka kwabo kufinyeleleke kungekhona. Ndiyathetha zombini iingubo kunye nefenitshala yendawo yokuhlala kunye nale "dachas". Ngaphandle kokuba isabelo kwi-tsekoskim bufetse sinokuxhasa le "gobble". Mhlawumbi, uluhlu ephezulu ezahlukeneyo, kodwa ngummelwane kwi stairwell Dementey, ndazibuza nje ngokuthozama yakhe. Kwaye, ngendlela, ukuthobeka. Enye inkalo yegosa, leyo sabanelahleko ngokupheleleyo lo mkhwa - eningalikhumbuleliyo kuye embetha okanye ndlongo, apho namhlanje bazama ngoyaba nda drobnachynnaga kakhulu.
Ngomdaniso wakhe we-Belarusian nomnxeba waseSoviet, uDementei wayengelona mntu unobungqina obunomdla, ngokuchanekileyo ngenxa yezakhono zakhe okanye engaziwayo. Ngaloo ngqiqo, inokufaniswa neNkulumbuso yaseRashiya uChernomyrdin. EBelarus, abantu abanjalo, abo apho ama-aphorisms okanye "aphorisms" abhaliwe, abangekho. Ingqungquthela yomzimba kaMalefeev yathetha encinci. Neencwadi ezinenkcukacha smart Sokolov, phakathi svіnarnіkaў vasmіpavyarhovyh, wamkhumbula kwenzeka "philological". Kwintlanganiso abanye Brest, ngoko intloko yasendle Efrem Sokolov kuphawulwe ngaphezu locaphulo isigaba ukususela Mxim Gorky kaThixo "Man - kuvakala okulungileyo 'yaye babefuna ukuba agqibe phambi elithi" eSoviet ".
Aphorisms Somlomo Sun Dementey i "Shasta umbhobho" kunye neerhuluneli, ngubani 'ixesha elide kwi ingquza "ukhumbula ngoncumo, kwaye isithethi - ukuba akunjalo uphawu nje kuphela phakathi ulawulo ngoko-nokuhlelwa, malunga apho sinokuthi into funny, kodwa ngenxa HIV .
Iphephandaba elithi "Svoboda" kwi-1991-m lifihlile amagama angama-Dzemyantseev kwimbali:
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-251, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
Umveleli wevenkile yokudlela "Masihambe, siya kudla" siya kugwetywa ngenxa yokuhlambalaza abaxhasi baseKurapat
INkonzo yezoLwazi ivume ukuba ikhutshwe ngamasayithi e-IP ngokungalunganga
Abapolitiki baseMerika malunga neentlanganiso: "I-Trump yenza i-US isizwe esibuthakathaka"
Ulibalekile. UVgeny Skochko: "Nantsi intolongo, kodwa ingeyakho, kwaye kukho inkululeko-kwaye ingomnye umntu"
UDemi Lovato wayebhedlele esibhedlele ngenxa yokugqithisa iziyobisi
I-Belarus yamenyelwa kwingqungquthela elandelayo yeentetho kwi-visa
IDayari yeIgnaty Domeyko. Yintoni ibhola leBelarusian laseChile elibhalela ngalo?
Post Previous:Ummeli u-Kurapat: Umkhosi we-militiaman-Akrestin waboshwa waza waboshwa ngokuxhasa ababhikishi
Okulandelayo Post:"ULasashenka ubuqili, njengo-Mussolini. Ulufundisi kaPutin, "Uhlalutyo lukaNovodvorkaya, olungakhange lulahlekelwe lifanelekileyo